नेप्से स्थिर, बजारमा उच्च कारोबार
नेपाल शेयर बजारमा केही समयदेखि दुई अङ्कको उचातचढाव देख्न पनि मुस्किल भएको छ । दैनिक एक अर्बको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको वर्तमान बजारमा कारोबार रकमलाई लिएर सन्तोष मान्न सकिए पनि बजारको अवस्था भने उही एक हजार ६५० नजिक नै घुमिरहेको छ ।
शेयर बजारमा खासै रौनक नदेखिनु तर कारोबार भने उच्च हुनुले के सङ्केत गर्छ
त ? सबै लगानीकर्ताको चासोको विषय बनेको छ अहिलेको बजारको उचारचढाव । वर्तमान शेयर बजारको अहिलेको अवस्थाको एक वर्ष अघिको मात्र पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने पनि ०७३ साल साउन महिनामा नेप्से एक हजार ८८८ को बिन्दुलाई छोएर घट्दै एक हजार २१९ को न्यूनबिन्दुसम्म ओर्लिएर पुनः सुधार आएको अवस्था हो अहिले । यस्तो परिस्थितिमा शेयर सस्तिएका बेला शेयर खरिद गरेकाहरूका लागि हालको बिन्दुमा मुनाफा असुली गर्दै शेयर बिक्री गर्नु उपयुक्त नै देखिन्छ ।
छोटो समयमा नै राम्रो आम्दानी हुने अवस्था कायम रहेको र बजार पुनः एक पटक राम्ररी करेक्सन आउनेछ भन्ने मानसिकता बनाएको लगानीकर्ताले शेयरको बिक्रीको चाप ह्वात्तै बढाएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो मतमा विश्वास गर्ने लगानीकर्ताको विचारमा बजारमा साविकका सूचीकृत कम्पनीको बोनस, हकप्रद, एफपीओको, नयाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको साधारण शेयर, जलविद्युत् कम्पनीहरूको साधारण शेयर लगायतका थुप्रै शेयर बजारमा भित्रिरहेको जसको अनुपातमा लगानीकर्ता बढ्न नसक्नुले आगामी दिनमा शेयरको मूल्यमा गिरावट आउने निश्चित छ भन्ने नै हो । हाल बिक्री उच्च बनाएका लगानीकर्ताको यस्तो विचारमा शक्ति छ ।
बजारमा दिनानुदिन शेयर सूचीकरण बढ्दो छ जसको चापलाई दैनिक एक अर्बको खरिदले मात्र धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको चुक्ता पुँजी बढाउने अवधि समाप्त भई सकेको छ । उनीहरूले आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को समेत मुनाफाबाट चुक्ता पुँजी पु¥याउन पाउने भएपछि अब धमाधम प्रतिफल घोषणा हुने क्रम जारी छ । जसले बजारमा शेयरको आपूर्ति अझै बढाउने देखिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय सस्थाहरूले पुँजी वृद्धिको अनुपातमा नाफा बढाउन सक्छन कि सक्दैनन् हेर्न बाँकी नै छ । चालू आर्थिक वर्षमा अब बैङ्क वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल भनेको अधिकांशले नगद लाभांश मात्रै हो । त्यो प्रतिफलको रकम पनि धेरै हुने सम्भावना न्यून छ । नेपाली शेयर बजारका लगानीकर्ताले नगद लाभांशलाई खासै रुचाएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता शेयर बिक्रीका लागि आतुर हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ ।
बीमा समूहको शेयरमा हकप्रद र बोनस शेयरको बाढी आउन बाँकी नै देखिन्छ । तर हाल चर्को मूल्य तिरेर खरिद गरेको बीमा कम्पनीको शेयरमा प्राप्त हुने हकप्रद र बोनस शेयरपश्चात् जीवन बीमा कम्पनीले दुई अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले एक अर्ब चुक्ता पुँजी पु¥याउने छन् । त्यो अवस्थामा लगानीकर्तासँग बीमा कम्पनीको शेयरको सङ्ख्या उच्च हुन सक्छ तर आफूले खरिद गरेको रकममा पुँजी वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुने अवस्था भने देखिँदैन । शेयरको सङ्ख्या थुप्रिदैमा नाफा पनि बढ्छ भन्ने होइन । नयाँ कम्पनीको शेयरहरू धमाधम बजारमा छिर्दैछन् । साधारण शेयरमा लगानीकर्ता धेरैले हातखाली नहुने गरी शेयर पाउने भएपछि त्यसतर्फ पनि आकर्षित देखिएको अवस्था छ । शेयरको दोस्रो बजारमा लगानी गर्नका लागि कर्जा लिने हो भने हाल १८ प्रतिशतको हाराहारीमा चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नै छ । यस्तो कारणले गर्दा गत वर्षको नाफाबाट बोनस र नगद लाभांश दिएपश्चात् बजारमा एक पटक ठूलो करेक्सन आउनेछ त्यसैबेला शेयर खरिद गरुला भन्ने सोचका लगानीकर्ता मुनाफा असुली गर्दै बचत खातामा नै आठ प्रतिशतसम्मको ब्याज पाइने तर्फ उन्मुख भएका छन् भने कतिपयले चर्को ब्याजको ऋण तिर्न थालेको देखिन्छ । त्यसले बजारमा शेयरको आपूर्ति बढाएको हो ।
दैनिक एक अर्बको शेयर बेच्ने लगानीकर्ता हुँदाको अवस्थामा खरिद गर्ने लगानीकर्ता को ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । शेयर बजारको सुन्दर पक्ष भनेको नै कुनै निश्चित समयमा कसैले बजारमा खतरा देख्छन् भने कसैले सम्भावना देख्छन् । शेयर बजारमा हाल सम्भावना देख्ने भने ब्याजदर अब घट्दैछ त्यसले बजारलाई मािथ लान मद्दत पुग्छ भन्ने नै हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट बोनस तथा नगल लाभांश दिन आफ्नो शेयर खरिद लागत घट्ने र प्रतिफलमा सहभागी केही महिनाभित्रै हुन पाइने सम्भावना देख्नेहरू बजारमा लगानी बढाइरहेको देखिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हाल चुक्ता पुँजी वृद्धिकै अनुपातमा नाफा बढाउन नसके पनि नाफामा भने सुधार गरेकै अवस्थाले पनि लगानीकर्तालाई थप शेयर खरिद गर्न बल पुगेको देखिन्छ । नयाँ बीमा कम्पनी आउने कुरालाई हाल सो समूहमा लगानी गर्नेहरूले खतराको रूपमा लिएका छैनन् । नयाँ कम्पनी व्यवस्थित र सूचारु हुन निकै समय लाग्ने अनि नयाँ साधारण शेयरमा लगानीकर्ताको हातमा दश कित्ता मात्र पर्ने अवस्थाले पनि राम्रो प्रतिफल पाइने बीमा कम्पनी पनि हाल लगानीकर्ताको रोजाइमा परेकै देखिन्छ । शेयर बजार घटन थालेको एक वर्ष नाघिसकेको अवस्थामा कुनै पनि समय बजारले गति लिन सक्ने अनि त्यो बेला आफू पछि परिन्छ कि भन्ने डरले कतिपय लगानीकर्ता अहिले नै लगानी गर्न आतुर देखिएका छन् ।
बजारमा हाल देखिएको दुई धारले नै शेयर बजारको परिसूचकाङ्क खासै माथि उठ्न पनि नसकेको अनि तल झर्न पनि नसकेको अवस्था विद्यमान देखिन्छ तर कारोबार भने उच्च रहेको छ । यस्तो अवस्थामा लामो सयमका लागि लगानी गर्ने लगानीकर्ताले शेयरमा राम्रो भविष्य भएको कम्पनीको शेयर खरिद गर्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । बजार उकालो लाग्न नसकेको परिस्थितिमा बजार तत्काल माथि जान्छ र नाफा गर्छु भन्ने छोटो समयका लागि लगानी गर्नेका लागि भने अहिलेको अवस्था उपयुक्त होइन । त्यसैगरी आफूसँग भएको बचतको रकम राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीमा लगानी गर्नु सही नै हो । जसमा सीमित प्रतिफल नै पाए पनि लामो समयसम्म टिक्न सकिन्छ तर चर्को कर्जामा ल्याएर शेयरमा लगानी गर्दा भने बजार अझै कति समय यस्तै अवस्थामा रहने हो भन्ने कुराको निश्चितता नभएकोले खतरा नै देखिन्छ । वर्तमान समयमा शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा पहिले हरेक वर्ष व्यापार बढाएर लगेको, राम्रो प्रतिफल दिँदै आएको र राम्रा सञ्चालक भएको समूहले सञ्चालन गरेको अनि व्यापार विस्तार गर्दा पनि खराब कर्जाको अनुपात भने नबढेको कम्पनी रोज्दा हुन्छ । आफू कुन वर्गको लगानीकर्ता हो, लगानीको रकमको जोहो कुन माध्यमबाट गरिने हो त्यसको लेखाजोखा गर्दै आवश्यक परेका बेला लामो समयसम्म बजारमा धानिन सक्ने सम्भावनाको मूल्याङ्कन गर्दै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।